आकासिँदो आयात : पुलाउको चामल समेत विदेशबाट, अर्जेन्टिनाबाट आउँछ कुखुराको दाना
पाँच महिनामा ६ अर्बको तरकारी
आर्थिक विकासका दृष्टिले प्रशस्त स्रोत सम्भावना बोकेको देश हो, नेपाल । विश्व मानचित्रमा असाध्यै सानो अंश आफ्नो कित्तामा पारेतापनि प्राकृतिक छटाहा हावापानी तथा भूगोल पर्यटनको लागि समेत लोभलाग्दो संभावना बोकेको देशको हविगत भने डरलाग्दो नै छ । सुन्दा अचम्म लाग्छ नेपाल सरकारले विश्वका १ सय १० भन्दा धेरै मुलुकमा आफ्ना कामदार पठाउन खुला गरेको छ । विदेशीएका यूवाका बग्रेल्ती समस्या एकातिर छँदैछ । हामीसँग भएका उर्वर भूमि बाँझो भएको यथार्थ छँदैछ । त्योभन्दा कहालीलाग्दो अर्को तथ्य के हो भने वार्षिक रुपमा नेपालले अरबौँ रुपैयाँको खाद्यान्न खरिद गर्छ । स्मरण रहोस् २०४० सालसम्म नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकमा कृषिजन्य वस्तु निर्यात गर्ने हैसियत राख्थ्यो । तत्कालीन समयमा सरकारले भारत, बंगलादेश, चीन, मलेसिया, कोरिया, जर्मनी, अमेरिकालगायतका मुलुकमा धान–चामल निर्यात गर्ने गर्दथ्यो ।
मुलुकले पछिल्लो पाँच महिनामा (उनाननब्बे) ८९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिवस्तु भित्रिएको छ । कृषिप्रधान देशले आयात गर्ने कृषिवस्तुको यो तथ्यांक डरलाग्दो रुपमा बढीरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनामा ८९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँको कृषि खाद्यान्न आयात भएको हो । यो आँकडा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १३.८ प्रतिशतले बढी हो । तथ्यांकअनुसार तरकारी, दाल, गहुँ, मकै, सोयाबिन तेलको आयात पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । नेपालले पहिलो ५ महिनामा १३ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको चामल मात्रै आयात गरेको छ । अझ यो दर अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको आयातको ४२.६ प्रतिशतले बढी हो । व्यापार तथा निकासी प्रवर्दधन केन्द्रको तथ्यांकअनुसार बास्मती चामल धेरै आयात भएको छ । पुलाउका लागि प्रयोग हुने चामलमा समेत नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष ०३५–०३६ मा धान तथा खाद्यवस्तु निर्यातबाट २४ करोड ३९ लाख रूपैयाँ आर्जन गरेको नेपालले अहिले ५ महिनामा ५ महिनामा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी रूपैयाँको धान–चामल आयात गरेर परनिर्भरतामा कीर्तिमान रचेको छ । नेपालमा धानबालीका लागि उपयुक्त १५ लाख ५२ हजार ४ सय ६९ हेक्टर क्षेत्रफल भए पनि उत्पादन भने बर्सेनि घट्दो छ । कयौँ हेक्टर जमिन बाँझो छ । नेपालको लागि आयात हुने धानको लागि चीन, भारत, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डजस्ता मुलुकबाट आयात गर्नुपरेको छ ।
त्यस्तै तरकारीको ६ अर्ब ९८ करोड बराबरको तरकारी आयात भएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकभन्दा १६.२ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै ५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको फलफूलको आयात भएको छ । फलफूलको आयात ३९.८ प्रतिशतले बढेको हो । सोयाबिनको तेल ५ अर्ब ५३ करोडको आयात भएको छ । मकै ५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । दाल ४ अर्ब ९९ करोड र गहुँ २ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । कुखुराको दानामा प्रयोग हुने मकै ब्राजिल, अर्जेन्टिनालगायतका देशहरुबाट आयात गरिन्छ । ‘तथ्यांक अनुसार मासुमा मात्रै आत्मनिर्भरता बढेको छ ।
तर, सरकार यो तथ्यांकप्रति गम्भिर देखिदैन । गत आर्थिक वर्ष २०७२-७३ को तुलानामा ७४-७५ अत्याधिक अनुपातमा बढीरहेको छ । तर, सरकारले कृषिको विकास गर्नेतर्फ सोच्न सकेको छैन ।
खेतीपातीका लागि सिँचाइको असुविधा
कृषि आधुनिकीकरण नारामा मात्रै सिमित हुनु
मलबीउ समयमा उपलब्ध नहुनु
सरकारी अनुदान अपर्याप्त हुनु
कृषिमा बढ्दो राजनीतिकरण हुनु
बजारको अभाव हुनु
कृषिमा यूवाशक्ति नहुनु
उर्वर भूमि खण्डिकरण
कृषि उत्पादनको लागत खर्च बढ्नु
यी अनेकन समस्याका कारण कृषिको विकास हुन सकेको छैन । नेपालले भारत र तेस्रो मुलुकबाट खर्बौको कृषिजन्य वस्तु वर्षेनी आयात गर्छ । अझ सोचनिय विषयमा स्वदेशमै उत्पादन हुने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर, तरकारी, फलफूल, जिउँदो जनावर, माछाजन्य पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, खाने तेल, गेडागुडीको आयात अघिल्ला वर्षहरुमा भन्दा निकै बढेको छ ।
नेकपाको कार्यदलका सदस्य कामप्रति उदासिनता, सार्वजनिक कार्यक्रमलाई पहिलो प्रथमिकता
कास्कीमा बर्डफ्लु भेटियो
प्रहरीलाई घुस दिन खोज्दा मोटरसाइकल चालक पक्राउ
काठमाडौंं । प्रहरीलाई घुस दिन खोज्ने मोटरसाइकल चालक पक्राउ परेको छ । महानगरीय प्रहरी प्रभाग क...
चैत २, २०७५ | शनिबार
एमबीबीएस अध्ययनरत शिशीर केसी फेवातालमा मृत फेला
कास्की । गण्डकी मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस अध्ययनरत एक किशोर फेवातालमा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् । ...
क्याप्टेनको सावधानिले जोगियो काठमाडौं आउँदै गरेको विमान, भएको के थियो ?
काठमाडौं । दुबइको आबुधाबीबाट काठमाडौं आउँदै गरेको इवाइ २९० विमान र भियतनामबाट पेरिस जाँदै गरेको ए...
चैत ४, २०७५ | सोमबार
पत्नी सीताको उपचारका लागि प्रचण्ड आज अमेरिका जाँदै
काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ आज अ...
चैत ३, २०७५ | आइतबार
अख्तियारमा कार्यरत प्रहरी हाकिमविरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, सुर्खेतमा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक जन्म ...
प्रहरीले फाल्यो विप्लव समुहको पार्टीको झन्डा र बोर्ड
काँग्रेसद्वारा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन
चैत ४ गतेका १८ ट्रेन्डिङ समाचार, दुनियाँमा दिनभर के भयो ? एक क्लिकमा थाहा पाउनुहोस्
राष्ट्रियसभा बैठकबाट पाँच विधेयक पारित
गगन थापा जनकपुरमा, सीके राउत र पूर्वराजालाई तीखो प्रहार
नेपाल एकदिवसीय क्रिकेटको वरियतामा १५ औँ स्थानमा यथावत
यस कारण थपियो डोल्पामा सुरक्षाकर्मी, रोकिएला त विप्लव समूहको हिंसात्मक गतिविधि ?
यो सरकार नै जनसरकार हो : प्रधानमन्त्री